Hopitaly fiterahana Befelatanana : 57 taona aty aoriana vao nisy mpitondra nijery -
AccueilRaharaham-pirenenaHopitaly fiterahana Befelatanana : 57 taona aty aoriana vao nisy mpitondra nijery
Miainga amin’ny fametrahana fotodrafitrasa fototra. Io hatrany no ifotoran’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, entina hampandrosoana ny firenena malagasy. Tafiditra ao anatin’izany indrindra ny fitokanana fotodrafitrasa maro sosona notanterahin’ny Filoham-pirenena mivady, teny amin’ny hopitaly fiterahana Befelatanana sy ny hopitaly Joseph Raseta Befelatanana, omaly. Fitokanana izay manamarika fa manampy sy manatsara ary miezaka mitondra avo ny fahasalamana, indrindra ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza ny Filoham-pirenena mivady. Tao anatin’izany, ny fitokanana ny fanorenana ny lalantsara na ny “Rampe” izay mampitohy ny rihana efatra eny amin’ny hopitaly fiterahana Befelatanana, izay fanomezana avy amin’ny governemanta Japoney. Satria tao anatin’ny 57 taona niorenan’ity hopitaly ity dia fantatra fa nisedra olana teo amin’ny famindrana efitra ireo mpiteraka na ireo mila fitiliana, ireo mpiasa tao rehefa simba ny “ascenseur” satria voatery lanjaina miaka-midina amin’ny tohatra ireo olona ireo nefa mahatratra any amin’ny 70 isa isan’andro ireo lanjaina manaraka izany tohatra izany.
Teo koa ny fitokanana ny fanamboarana ny simba, fanatsarana ny hopitaly manontolo, izay fanomezana avy amin’ny Filoha, fa ankoatra iza,y notolorany finday miisa 234 ireo mpitsabo ao an-toerana. Ny hopitaly Joseph Raseta Befelatanana kosa, notolorana fiara mpitondra marary, izay avy amin’ny Fitondram-panjakana Malagasy. Nisy koa ny fitokanana sy fanatsarana ary fampitaovana ny sampandraharaha fitsaboana fo na “cardiologie” ny pavillon special B izay fanomezana avy amin’ny orinasa Jovenna. Ny fitokanana ny fanorenana ny fampitaovana latabatra, seza ary “vidéo projecteur” ny efitrano fivoriana avy amin’ny vadin’ny Filoha, Rajaonarimampianina Voahangy. Izany rehetra izany izay entina hanatsarana ny fitsaboana sy ny fandraisana an-tanana ireo marary sy ny tontolony eny amin’ny hopitaly satria ilain’ny firenena ny manana vahoaka salama indrindra, fa ny reny izay loharanon’aina sy ny zaza, araka ny fanambaran’ny Filoha nandritra ny kabariny. Marihina fa isan’ny angady nananana sy vy nahitana izao fametrahana ny fotodrafitrasa rehetra izao ny vadin’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Voahangy. Izy no nanao ny fifampiraharahana rehetra nahazoana ny famatsiam-bola. Izy rahateo ihany koa no reny mpiahy ny fahasalaman’ny reny sy ny zaza.
Nohamafisin’ny Filoha nandritra ny kabary nataony fa mila fijery mifototra amin’ny tany isika mba hampandrosoana ny firenena. Voakasika ao anatin’izany ny fitodihana amin’ny fahaterahana sy ny zaza vao teraka ary ny reny nanome aina. “Izay fomba fijery izay no tokony hoentina eo amin’ny firenena entina hampandrosoana. Ny asa izay vita eto dia mitodika amin’ny fahaterahana, mitodika amin’ny zaza vao teraka, mitodika amin’ny reny izay manome izany fahaterahana izany,” hoy ny Filoha. Nefa tsy vitan’ny Filoha irery na ny Fitondram-panjakana irery ny fampandrosoana ny sehatra ny fahasalamana fa mila ny fanomezan-tanan’ny tsirairay ny fampandrosoana ny sehatry ny fahasalamana fa mila ny fanomezan-tanan’ny tsirairay, araka ny teniny hatrany nanao hoe, “mila tanana maro mifandray, manolotra mba hampandrosoana ity firenena ity. Be ny asa tokony hatao eo amin’ny ara-tsosialy, ara-pahasalamana ary izany no handehanan’ny Filoham-pirenena manerana ity firenena ity manentana ny Malagasy rehetra hifanolo-tanana, hanome tanana ary fotoana androany (omaly) hamerenana indray izany foto-kevitra izany satria andron’ny fahaterahana izao, ary teraka ny hevitra hanatsara sy hanorina ary hanome aina fa tsy eto ihany fa manerana ny firenena iray manontolo ka mampirisika ny vehivavy tsy hikely soroka amin’ny fanomezan-tanana hampandrosoana ny firenena aho ka ny asa izay atao dia ho fitaratra ho an’ny rehetra ary ho hery ho an’ny firenentsika.”
Teratany Karana iray indray no nisy naka an-keriny omaly maraina tokony ho tamin’ny valo ora latsaka teny Behoririka. Roalahy nitondra moto cross ary nilanja basy poleta sy kalachnikov araka ny filazan’ireo nanatri-maso no avy hatrany ...Tohiny